Fampisehoana - KingHOOD Gaseous System Co., Ltd.
KingHOOD Gaseous System dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia avo-orinasa sy ny anjara amin'ny fampiharana ny VPSA fitaovana oksizenina. Miantehitra amin'ny matihanina tombontsoa, ​​ny orinasa dia manana ekipa fitantanana tsara, ihany koa dia manana fitaovana tonga lafatra fitaovana sy ekipa matihanina za-draharaha. Ny rafitra tonga lafatra sy ny antonony miantoka ny fitantanana ny orinasa manao ny tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra. KingHOOD dia manolo-tena isan-karazany fitaovana VPSA oksizenina ny fikarohana sy ny fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra, mifandray amin'ny fanompoana, manome toro-hevitra ara-teknika sy ny vahaolana.
KinHOOD miara-miasa amin'ny manaraka nitarika orinasa eto an-tany ho an'ny fifandraisana:
1, Enterprise olombelona loharano
Ny tena sy ny fitantanana ara-teknika mpiasa ny KingHOOD rehetra miasa amin'ny orinasa fitaovana mandatsa-dranomaso mihoatra ny 10 taona, izy rehetra, manana traikefa be dia be matihanina. Nandritra ny fotoana ela, dia fohifohy ao fampiharana andaniny, amin'ny alalan'ny teknika injeniera fitsidihana an-toerana, izahao ny olana, ary hanatsara ny teknolojia hatrany hatrany. Mandritra izany fotoana izany, dia mbola mifantoka amin'ny orinasa teknolojia, mandroso hanangana za-draharaha.
2, Design & orinasa mpamokatra entana fahaiza-
Ny injeniera dia resposible ho an'ny rehetra ny famolavolana sy ny sary ho an'ny famokarana. Beleivev ny mandroso izahay dia fototra ho an'ny teknolojia orinasa suatainable fampandrosoana. Ankoatra izany, KinHOOD foana mifandray amin'ny fitarihana orinasa eto an-tany ho an'ny fifandraisana, izay haingana ny fomba fanatsarana ny teknolojia. Amin'ny alalan'ny adpoting ny world'd nitarika orinasa teknolojia toy ny Bayer, Tosoh, miara-miasa amin'ny Akademia Sinoa Momba ny Siansa, South China University of Technology, Haicheng Teknolojia sy ny fikarohana siantifika vondrona. Koa amin'ny alalan'ny fitaovana manokana asa firaketana an-tsoratra, ireo lafiny rehetra mitarika ho amin'ny KingHOOD ny fitaovana manana ny endri-javatra tsy manam-paharoa, ny teknolojia ia amin'ny lohalaharana foana ny orinasa. Toy ny molekiolan'ny sivana ny fametrahana, ny fizarana ny rivotra mikoriana, ny fanatsarana ny fanaraha-maso ny rafitra, rafitra fanahafana, lehibe mandatsa-dranomaso famatsian rafitra, sns KingHOOD ny mitohy fampiharana ny teknolojia vaovao dia ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ny teknolojia ny orinasa miaraka amin'izay koa.
3, Quality sy ny Service
Equipment ny kalitao sy ny asa fanompoana no tena zava-dehibe ho an'ny orinasa ny survial, ary koa ny fanalahidy ho an'ny fampandrosoana. Tsy mandany fitantanana hentitra tsara, miezaka hanatsara ny kalitaon'ny an-toerana fanompoana. Izahay hanara-maso ny fitaovana 's fanirahana, fitaovana debugging, toe-tsaina sy ny fanompoana mpanjifa fahafaham-po, manao manambara aorian'ny - service firaketana ho an'ny mpanjifa rehetra. Dia mandamina personnels mba contactcustomer an-telefaonina, fandefasana fax, mailaka ary amin'ny fitsidihana-toerana. Ny fahafantarana ny fitaovana mandeha toerana, fanampiana sy hitari-dalana ny mpanjifa foana ny fitaovana, mampahatsiahy mpanjifa ara-potoana mba hanoloana ny piesy. Mino izahay fa ny mpanao, fifadian-kanina ary ny asa fanompoana matihanina no hahatonga ny mpanjifa rehetra mahatsapa ny fiheverana fanompoana.
Clients Name Area Application fahafahana
Yunnan fampiasam-bola Forsetry Ary pulp Yunnan 10 taonina pulp bleaching 360Nm 3/ h
Chenming Grou (Jinlin) Jilin oxygène delignification 700Nm 3/ h
Tiger Forest & Paper Group Hunan 8 taonina pulp bleaching 350Nm 3/ h
ChiTianhua Paper Guizhou 20 taonina Bamboo pulp bleaching 1400Nm 3/ h
Shaowuzhongzhu Fujian 4.5 taonina Bamboo pulp bleaching 400Nm 3/ h
Huaihua Juntai Hunan 40-taonina pulp bleaching 2000Nm 3/ h
Lee Man Paper bary Chongqing 12-taonina pulp bleaching 500Nm 3/ h
Fengli Paper Mill Hunan 5-taonina pulp bleaching 200Nm 3/ h
Yongfeng Paper Mill Sichuan 12-taonina pulp bleaching 700Nm 3/ h
Haisum teknolojia i Vietnam 10 taonina pulp bleaching 400Nm 3/ h
Chenming vondrona Shandong 15-taonina pulp bleaching 600Nm 3/ h
Danhua vondrona Jiangsu Enviroment fiarovana 500Nm 3/ h
HSIK Wang Shan Twinking Star Hunan Oksizenina -enriched mpandrendrika 2000Nm 3/ h
Qingdao Taiwan Fibre Glass Shangdong Fatana fandrendrehana metaly Glass Oksizenina -fuel 1750Nm 3/ h
Huajin taratasy Jiangxi 10 taonina pulp bleaching 600Nm 3/ h
Zhenxing taratasy Liaoning 12-taonina pulp bleaching 700Nm 3/ h
Haisum SKD Project Bangladesy Enviroment fiarovana 150Nm 3/ h
Laishan pulp bary Sichuan Bamboo pulp bleaching 380Nm 3/ h
Kediweijing Guangdong Fatana fandrendrehana metaly Glass Oksizenina nampanan-karena 400 NM 3/ h
Zhuji Paper bary Guangdong pulp bleaching 350Nm 3/ h
Xingchangsheng Jiangsu firaka fandrendrehana metaly 250Nm 3/ h
Yunjinglin Paper Yunnan Pulp bleaching pulp bleaching 550Nm 3/ h
Wanjing Teknolojia Myanmar Mameno toerana noho ny fanapahanao (3 milentika) 50Nm 3/ h
Suzhou Zhong Cai Angola Mameno toerana noho ny fanapahanao (2 milentika) 50Nm 3/ h
Suzhou zhonghua Mozambika Mameno toerana noho ny fanapahanao (2 milentika) 50Nm 3/ h
Liangmianzhen Jiangzi pulp bleaching 500Nm 3/ h
Shuangdeng taratasy Mill Jiangsu pulp bleaching 240Nm 3/ h
SFI Malezia Enviroment fiarovana 600Nm 3/ h
SKK Philipines EAF25-taonina 500Nm 3/ h
Xinhui varahina Xinjiang Copper fandrendrehana metaly 1000Nm 3/ h
Shandong Fibre vondrona fitaratra Shangdong Fatana fandrendrehana metaly Glass 3250Nm 3/ h
Quanlin taratasy Shangdong pulp bleaching 3000Nm 3/ h
Luyang Shangdong Oksizenina karena combusation 500Nm 3/ h
Wuliangye Group Sichuan Fatana fandrendrehana metaly Glass 150Nm 3/ h
Jnshan simika Indrusty Hanan Oksizenina karena entona fanaovana 800Nm3 / h
Double A Tailand pulp bleaching 800Nm3 / h
Longmang mpandrendrika Sichuan fandrendrehana metaly 2500Nm 3/ h
Laibin pulp Mill Guangxi pulp bleaching 500Nm 3/ h
Changhai vondrona Jiangsu Fatana fandrendrehana metaly Glass 1300Nm 3/ h
Junlin fanafody Hebei fanafody simika 500Nm 3/ h
Xingbang International Rosia pulp bleaching 500Nm 3/ h
Shandong Fibre Glass Shangdong Fatana fandrendrehana metaly Glass 1400Nm 3/ h
Jiali Gas Jinagxi Fatana fandrendrehana metaly Glass 1800Nm 3/ h
Huabei Jingmao Gansu oksizenina nampanan-karena 6000Nm 3/ h
Wuhai mpandrendrika Mengu oksizenina nampanan-karena 4000Nm 3/ h
Huabo Lead orinasa Anhui Lead fandrendrehana metaly 3000Nm 3/ h
Shandong Fibre Glass Shangdong Fatana fandrendrehana metaly Glass 2800Nm 3/ h
Jinhong Gas Shangdong Fatana fandrendrehana metaly Glass 3850Nm 3/ h
Maolian Teknolojia Tianjin Copper fandrendrehana metaly 3334Nm 3/ h
inhong Gas Shangdong Fatana fandrendrehana metaly Glass 2600Nm 3/ h
Dexing Lead Industry Jiangxi Lead fandrendrehana metaly 2000Nm 3/ h
Gansu Huayi Gansu Lead fandrendrehana metaly 1300Nm 3/ h
Jiangsu Jihua Jiangsu Wastewater fitsaboana 2200Nm 3/ h
Shengshihuayuan Guangdong Ozone gropy 130Nm3 / h
Beijingguodian Guizhou Ozone gropy 300Nm3 / h
Qianrunkaiyuan Beijign Ozone gropy 100Nm3 / h
Qianrunkaiyuan Shandong Ozone gropy 30 * 2Nm3 / h
Fujain Newland Gas Tianjin Maolian Chian Construction Railway Group CO., LTD Jilin Zambia Congo Ozone gropy Copper fandrendrehana metalyCopper fandrendrehana metaly 1120Nm3 / h 4000Nm3 / h 5000Nm3 / h